Sweden oo soo saartay Tirada Dadka la talaalay ilaa Hada Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaSweden oo soo saartay Tirada Dadka la talaalay ilaa Hada
Sweden oo soo saartay Tirada Dadka la talaalay ilaa Hada
January 12, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Tirada dadka qaatay tallaalka Corona ee Iswiidhan waxay gaareen ugu yaraan 80,000 oo qof. Ma jiraan wax dhibaato ah oo ka soo gaartay gobolka hirgelinta tallaalada. Sida ay ku dhawaaqday Maamulka Caafimaadka Dadweynaha.
Hay’ada ayaa maanta war-saxaafadeed ay maanta soo saartay, “Laga bilaabo 10-kii Janaayo, ilaa 80,000 oo qof ayaa laga tallaalay cudurka ‘Covid-19’ ee Iswiidhan, sida lagu sheegay xog ay soo sheegeen gobollada. Tirada waxaa laga yaabaa inay intaas ka badneyd, maadaama aysan jirin wax xog ah oo laga helay saddex gobol toddobaadkii ugu horreeyay. Marka, tirakoobku ma dhammaystirna, waana la cusbooneysiin doonaa marka xog cusub la soo sheego.
Dhowr gobol ayaa sheegay inay keydiyeen qiyaasta tallaalka si ay u awoodaan inay u maamulaan qiyaasta labaad.